စွဲငြိဖွယ်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စာနယ်ဇင်းပညာနှင့်ပညာရေး | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 8, 2017 Harrison ပန်းချီဆရာ
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ထားသောအဖြစ်မှန်သည်သင်၏အနာဂတ်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ to မှပါဝင်လိမ့်မည်။ TechCrunch ခန့်မှန်း ၄ နှစ်အတွင်းမိုဘိုင်း AR သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံစျေးကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်ရှေ့တန်းအဆင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ရုံးခန်းပရိဘောဂများရောင်းချသည့်အရောင်းပြခန်း၌ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံကသင်၏စီးပွားရေးကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်အကျိုးရှိစေလိမ့်မည်။
VR နှင့် AR အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Virtual reality (VR) ဆိုသည်မှာအသုံးပြုသူပတ် ၀ န်းကျင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတိုးမြှင့်သည့်အဖြစ်မှန် (AR) သည်တကယ့်ကမ္ဘာရှိ virtual element များကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။
ငါ့ကိုမယုံဘူးလား VR / AR လက်ခံပြီးဖြစ်သောအချို့စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ပါ။
ယခုအပတ်တွင် CNN သည်သီးသန့် VR သတင်းစာယူနစ်ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့သည်ဗီဒီယို ၃၆၀ တွင်အဓိကသတင်းဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ပြပြီးကြည့်ရှုသူများအတွက်ရှေ့တန်းနေရာတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ စစ်ဇုန်၏ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင်ရှိနေခြင်း၊ နောက်အိမ်ဖြူတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ရှေ့တန်းထိုင်ရန်သို့မဟုတ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း၏ရှေ့တွင်ရပ်နေသည်ဟုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါသလော။ ၎င်းသည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့်စာနယ်ဇင်းပညာကိုစားပွဲပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ CNN သည် VR ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့ ်၍ ယူနစ်အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည် စပိန်အတွက်နွား၏ပြေး.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က CNN သည် VR နှင့်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရည်အသွေးမြင့် ၃၆၀ ဗွီဒီယိုတွင်သတင်းပုံပြင် ၅၀ ကျော်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးကြည့်ရှုသူများအားအလက်ပိုမြို့၏ပျက်စီးမှုများ၊ အမေရိကန်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်ရှေ့တန်းအမြင် skydiving of total - စုစုပေါင်းဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုတည်းမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာ ၃၆၀ ကိုကြည့်ရှုသူသန်း ၃၀ ကျော်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ ရင်းမြစ် - CNN က
Lowr သည် VR သည်အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောအလောင်းအစားများကိုစောစီးစွာပြုလုပ်သည်။ ဖောက်သည်များအားမော်တာများရောနှောခြင်းသို့မဟုတ်ကြွေပြားခင်းခြင်းကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်လက်တွေ့ကျကျသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် In-store virtual virtual အတွေ့အကြုံကိုစတင်ခဲ့သည်။ Lowe ၏ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုတွင်ဖောက်သည်များရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည် ၃၆% သည်စီမံကိန်းကိုမည်သို့ပြီးမြောက်နိုင်မည်ကိုပိုမိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသည် Youtube ဗီဒီယိုကြည့်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
Lowe ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖွဲ့အနေဖြင့်အနှစ်တစ်ထောင်ကျော်သည် DIY စီမံကိန်းများအတွက်နေအိမ်များတိုးတက်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းအတွက်လွတ်လပ်သောအချိန်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Lowe အတွက်မူ virtual reality သည်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ရင်းမြစ် - CNN က
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရကိုလုံးဝပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားသည်။ ကြော်ငြာခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နေရာချခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြသရန်ဖန်တီးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအတွက်မည်မျှအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးမည်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေးကြည့်နိုင်သည်။ VR သည်စျေးကွက်သမားများအတွက်ပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော၊ အမှတ်ရစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည့်စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းတစ်ခုပေးထားသည်။ ဒါဟာထက်မဆိုပိုကောင်းမရ!
သင့်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်အနည်းငယ်။ Vimeo ကဆက်ပြောသည် 360 ဒီဂရီဗီဒီယိုများ upload နှင့်ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်း။ ၄ င်းသည်အကြောင်းအရာ ၃၆၀ ကိုပြသရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများနှင့်အခြားဖန်တီးမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုမမေ့ကြစို့နှင့်။ ယနေ့အထိ ၃၆၀ ဒီဂရီဗီဒီယိုပေါင်းတစ်သန်းကျော်နှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီဓာတ်ပုံပေါင်း ၂၅ သန်းရှိခဲ့သည်။ ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်မသွားတော့ဘူးလို့ထင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။
VR / AR ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားထောင်လိုပါသည်။ သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိမည်ဟုသင်ထင်သနည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးမျှဝေပါ
Tags: CNNစွဲငြိဖွယ်ရာစွဲငြိဖွယ်ရာပညာရေးစွဲငြိဖွယ်ရာသတင်းစာပညာစွဲငြိဖွယ်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလွမ်lowes holoroom ဖြစ်သည်Vimeovimeo ၁
အဘို့အစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ VP Harrison DK New Media။ သူသည်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစျေးကွက်သမားဖြစ်ပြီးသူ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှတစ်ခုကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်တစ်ခုနှင့်လူသိရှင်ကြားဝယ်ယူခဲ့သည်။ Harrison သည်အတွေ့အကြုံရှိဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူနှင့်ဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည်။ သူသည်ထိုကျွမ်းကျင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အခြားအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများပါဝင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စျေးကွက်ပြတ်တောက်ခြင်း၏စွမ်းအားကိုအာရုံစိုက်စေသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။